Mavara efoni efoni anotya nezwi rekuti "mureza". Tungamira kune vezvenhau uye pane imwe nharembozha inoshambadzira nhare nyowani "yemureza" nemitengo isingadaviriki yakaderera. Iyo Snapdragon 865, iyo 90Hz yekuwedzera mwero inoratidzira, quad-makamera, nekuchaja nekukasira - izvi zvakajairika mu2020 zvekuti ndinopedzisira ndashama pamashizha emashizha mazuva ano. Asi zvadaro, idzi nhare dzinodzokera nesa-sub-par mushandisi ruzivo. Rini Xiaomi yakazivisa iyo Mi 10T yakateedzana yeIndia, ndakafunga kuti ndinenge ndichizamura zvakare. Asi, ndakanga ndisina kururama.
Iyo Xiaomi Mi 10T Pro inoita senge imwe yeaya maficha-akapfuma mafoni ayo asingatomboita hanya nezveruzivo rwekupedzisira mushandisi. Mushure mezvose, inomhanya yakafanana MIUI 12 iwe yaunowana pane Redmi Note 9 Pro, saka chiitiko chinofanira kutora kurova, handiti? Pfungwa yangu yakachinja nekukurumidza pandakaiburitsa mubhokisi. Iyo Yangu 10T Pro inonzwa kunge mureza uye kana iwe ukatarisa mutengo weti, iwe unonzwa kunge mukundi. Nekudaro, haina kunzwa seakakosha seMi 10 5G uye haisi mutsivi.
Asi yakanaka senge imwe T foni, kureva OnePlus 8T? Sezvo ini pandakaongorora iyo OnePlus foni mavhiki mashoma apfuura, ndiri munzvimbo yakanaka kuti ndipindure izvo.
Xiaomi inogadzira mamwe emhando dzakanakisa-dzinodhura mafoni muIndia. Nekudaro, nekuda kwekupa kwayo mureza, zviri pachena kuva netarisiro dzakakwirira. Mushure mezvose, foni yepamberi inoda kutarisa uye kunzwa yakanaka pamberi pezvose zvimwe. Iyo Mi 10T Pro ndeye zvachose stunner, iine psychedelic girazi kupedzisa kumashure.
Kune vanhu vanofarira matsva akaomeswa matte apedza pamafoni matsva asi ini ndiri weboka rinoifarira blingy. Ingotarisa iyo Mi 10T Pro kubva kumakona ese zvakanyatsonaka - hapana chikamu chakasara chisina nzvimbo dzinoonekera dzinopenya. Iyo simbi furemu, kumberi, uye neshure zvinowedzera kusvika pakugovera kunzwa kuti chinhu ichi chakagadzirwa kubva muchivharo chimwe chegirazi. Ini ndaive neiyo nhema asi yaisambo kupa tema tint kumashure.
Ehezve, uku kubwinya kukuru pane smartphone kunoreva smudges, uye mukomana oh mukomana, iyo Mi 10T Pro inoda smudges. Ini ndaifanira kuramba ndichipukuta yega yega maminetsi makumi matatu kuti ichengetedze iyo "itsva foni" kutaridzika. Xiaomi anosunga kesi nefoni uye izvo zvinofanirwa kubatsira kudzikisa maitiro ekupukuta nemahombekombe akakura. Iyo Gorilla Girazi 30 inodzivirirwa kumberi, kumashure uye kamera hump chivimbo chakanaka pakurwisa kukwenya. Ini handina kuwana chero hukuru hukuru munguva yangu, kunyangwe zvaizotora mwedzi mishoma kutanga kuona kukwegura.
Paunenge iwe ukachengeta parutivi blingy glossy chimiro, iwe unocherekedza iyo huru kamera module. Hazvina kujairika munzira dzese asi zvakandiita kuti ndide kuzvitarisa kupfuura nakare kose. Xiaomi iri kuratidza iyo 108-megapixel kamera pano uye inonyatso kumira kunze. Usanyengedzwe nemamwe madenderedzwa ekuwedzera pazasi payo - pane mamwe chete maviri chaiwo makamera. Yekupedzisira ndiyo mwenje nepo imwe yacho ingori chinobata nzvimbo.
Iyo yekumberi inotaridzika kunge yazvino neyayo yakatetepa-bezel kumucheto-kune-kumucheto kuratidza, izere neiyo punch-hole cutout yekamera. Sezvo ichi chiratidziro cheLCD, iwo mabhezeri ari mukobvu kupfuura iyo Mi 10 5G. Muchokwadi, chin chinokura zvakanyanya kuti dzigadzire vatyairi uye machipisi, zvese izvo zvinoita kuti Mi 10T Pro iratidze kunge isingadhuri kubva kumberi. Oo, chiratidziro chakati sandara kumicheto - hapana makona akakombama seMi 10. Ini ndinofunga iyo Mi 10 5G mukuenzanisa inotaridzika inokatyamadza kubva kumberi.
Pane zvese, iyo Mi 10T Pro inotaridzika kushevedza nehembe yayo inopenya asi ini zvakadaro handikwanise kudarika dhizaini dhizaini yeMi 10 5G. Foni iyoyo inotaridzika zvakanaka munzira dzese.
Xiaomi ataura zvakanyanya pamusoro pechiratidzo cheMi 10T Pro. Yakakura pa6.67-inches uye ine resolution ye1080p. Iyo mwero wekuzorodza wakakwenenzverwa ku144Hz, iri pakati pezviratidziro zvinokurumidza pamusika we smartphone. Uyezve, iri IPS LCD pani, kunova kutsauka kwakasimba kubva kuma AMOLED skrini paMi ​​10 uye Redmi K20 Pro.
MaGeeks uye nerds vanogona kunge vasina kugadzikana nezve iyo LCD inoratidzira asi chokwadi ndechekuti maLCD maonesheni ari nani pakuwana echisikigo mavara ematani achienzaniswa nema AMOLED. PaMi 10T Pro, iwe zvechokwadi unorasikirwa neaya "punchy 'mavara uye" akadzika vatema ". Izvo zvakati, ini ndinoshandisa iyo iPhone SE uye iyo ine yakanakisa yakarongedzwa LCD kuratidza. Iyo iri paMi ​​10T Pro inenge yakanaka senge iyoyo, kana zvisiri nani.
Zvirinani mupfungwa yekuti Xiaomi anotara iyo pani ine JNCD chiyero che0.39, icho chiri muChirungu chechirman chinoshandura kune rakakura ruvara kunyatso. Kunyangwe ndanga ndichipfuura nepahofisi yangu maemail kana kutarisa iyo iPhone 12 ongororo, ndakainakidzwa ndichiona paMi ​​10T Pro. Iyo yekuratidzira inowana yakawanda inopenya mukati meimba uye iyo yakasarudzika tuning yemavara zvaireva kuti ini ndaive nechivimbo chekutonga mapikicha ehunhu akananga pakatarisana nefoni.
Iyo 144Hz yekuvandudza mwero modhi inogadzira kutsetseka kutsikisa pamwe neanenge maficha, uye ini ndakafunga mamiriro apo iyo nhanho-nhanho inoshanduka yekuvandudza chiyero chinhu chakashanda. MuAmazon Prime mafirimu, ndakanzwa mwero wekuzorodza wakadzika kusvika makumi maviri nemana panguva yemuvhi uye ndokukwira kusvika makumi matanhatu ndichiona vhidhiyo yeYouTube. Yakawanda mitambo yakavharwa pa7 kana 24Hz, uye kugadzira mutsauko pakati peaya manhamba kwakaomarara kumeso angu asina kupfeka. Zvese zvandinoziva ndezvekuti chiratidziro chakaramba chiri bhatiri rakatsetseka mukati mese.
Imwe nharaunda kwandainzwa kuratidzwa kushayikwa kwaive kupenya kwekunze. Masikati, ndakanga ndotadza kuona kuratidzwa. Iwo mazana matanhatu nemakumi matanhatu emataneti ekupenya kwakanyanya haatenderi kukodzera kwekunze kwekunze. Iyo OnePlus 650T matombo achienzaniswa neyayo 8+ nits yekukwirira kupenya. Kunyangwe, husiku, iwe unogona kudhonzera pasi kupenya kune zvakadzikira zvakanyanya mazinga.
Iyo Xiaomi Mi 10T Pro inoshandisa iyo nyowani nyowani Snapdragon 865 chip yakarongedzwa kune 8GB yeLPDDR5 RAM uye 128GB yeUFS 3.1 yekuchengetedza. Nehunyanzvi, izvi zvinokurumidza kupfuura kumisikidza pane OnePlus 8T. Muchokwadi, inokurumidza kune ese smartphone mabasa iwe aunogona kukanda parunhare izvozvi. Ndakaedza zvikamu zvishoma zve Call of Duty Mobile uye Asphalt 9: Ngano, ese ari maviri aishanda pane akanakisa. Foni iyi yaibata mitambo pairi yemhando yepamusoro yemifananidzo pasina kana kunetsa.
Chinonyanya kukosha chiitiko che software uye mabatiro ainoita maapplication ezuva nezuva pamwe nemabasa. Xiaomi iri kutumira iyo Mi 10T Pro ine MIUI 12 yakavakirwa Android 10, iine mashoma maGoogle maapplication anotsiva mamwe masheya MIUI maapp. MIUI 12 ndeye chinoonekwa chinotaridzika chetsika yekushandisa system uye ndakanakidzwa nekuishandisa pane Mi 10T Pro. Inokurumidza uye inoshanda pakubata boka remaapplication kamwechete. Ini handina kuona lags kana jitters ndichivhura mitambo kana switching pakati peesource-yakasimba maapplication.
Iyo dhizaini yakafanana neApple yeIOS asi ese eApple epakati maficha aripo munzvimbo chaidzo. Pane dhizaini yekushandisa kusundira iwo maapplication mukati, nepo Google feed iri swipe kure kure nekamba yemba. Iyo interface inoratidzika yakachena kupfuura MIUI 11 uye vazhinji vatengi vefoni yepamberi vanogona kupedzisira vaakuda zvakanyanya. Kune mazana ezvisarudzo zvekugadzirisa zvaunogona kuongorora - kubva pakushandura mafonti, kumatimu, kugadzirisa bhari yemamiriro, kugadzirisa Control Center, nezvimwe. Pane zvakawanda zvekuita neMIUI uye izvo zvinoita kuti mushandisi awane hupenyu.
MIUI zvinoreva kushambadzira kwevakawanda uye paMi ​​10T Pro, Xiaomi ari kuvimbisa hapana. Ini handina kuona chero kushambadzira mukati meiyo system interface. Yangu yekuongorora unit yakamhanya pane yekutanga kuvaka uye yakauya neZili app pre-yakaiswa. Xiaomi anoti zvitoro zvekutengesa hazvizotakure neizvozvo. Ini ndakawanawo iyo Facebook, Amazon, WPS Hofisi maapplication akaiswazve - ese ayo anogona kubviswa nyore. Kune mamwe MIUI maapplication zvakare asi ini ndinoona mazhinji acho achibatsira zuva nezuva.
Pane zvese, ini ndinoda iyo MIUI 12 chiitiko paMi ​​10T Pro. Kukwezva kwemifananidzo yeII dhizaini kwakandishandira. Izvo zvakati, ndakarasikirwa neSuper Wallpaper pano - Xiaomi inogumira iyo kumafoni ane maOOLED kuratidza. Zvaunofarira zvinogona kusiyana.
Mimwe miniti zvinhu zvakabata pfungwa dzangu zvinosanganisira iyo haptic mhinduro. Mota yekudengenyeka iri nani uye ndakawana mhinduro yakanakisa ndichitaipa, kana ndichifamba kuburikidza neUI. Hazvina kunaka kunge maPhones 'haptics asi zvave padhuze zvakakwana - iwe uchafanirwa kuzvionera izvi mumunhu kuti unzwisise. Iyo padivi-yakaiswa zvigunwe zvemunwe inokurumidza kuvhura uye nyore kusvika. Pamusoro pezvo, iyo inorema 218 gramu yehuremu inoita kuti igutsikane-ruoko inzwe.
Chandakarasikirwa yaive inotyisa gudzanzwi mashandiro kubva kuMi 10. Iyo iri paMi ​​10T Pro haina kurira seyakanaka asi iyo inobhadharisa mhando neiri nani ruzha. Kufona kwemhando yepamusoro kwaive kwakanaka kuburikidza neyekutanga uye ini handina kuona chero kudonha mumambure munzvimbo dzinonetsa.
Xiaomi yakachengeta yekutanga kamera setup yakafanana neiyo kubva kuMi 10 5G. Nekudaro, iwe unowana imwecheteyo 108-megapixel kamera yakapetwa ne13-megapixel Ultra-yakafara kamera uye 5-megapixel macro kamera. Iyo T yakateedzana inorasikirwa yakadzika kamera kubva kuMi 10 akateedzana. Iyo yekumberi kamera inoramba yakafanana zvakare, neayo 20-megapixel Samsung sensor. Chaizvoizvo, iyo kamera yekamera inoramba isina kuchinja.
Izvo zvachinja, zvisinei, iko kugadzirisa software. Ndichiri kuongorora iyo Mi 10, ini ndakawana makamera ayo ekuwedzeredza iwo mavara kunyangwe iyo AI modhi yakadzimwa. Makamera eMi 10T Pro anoedza kuenda kune mamwe matoni echisimba achienzaniswa, neAI modhi yakadzimwa. Ini pachezvangu ndinoda echisikigo maitiro ekugadzirisa mifananidzo uye ini ndaida izvo izvo Mi 10T Pro yaifanira kupa. Makara akarurama chaizvo zvichienderana nechiitiko apa paine chiyero chinoshamisira pakati pekusiyana, kuratidzwa, uye chena chiyero.
Nechiedza chakaoma, iyo Mi 10T Pro inoenderana zvinoenderana uye inoramba ichipa mifananidzo yakanaka. Iyo kamera inochengeta kuzadza kuri pasi pesimba asi inowedzera chete kana zvichidikanwa. Husiku, iyo huru 108-megapixel sensor inopfuura zvakakwana kubata mabara anonyengera. Ini ndakashamisika kuona iwo madudziro ainochengeta. Iyo Husiku Mode ingori idzi kana iwe uchida zvishoma inopinza mifananidzo ine shoma ruzha. Iyo 108MP modhi masikati machena inobvumidza yakadzama mapfuti uye iwe unogona kuramba uchiswededza mukati uye uchiri kufadzwa nezvakanaka izvo mufananidzo unobata. Ndainakidzwa nekushandisa maMi 10T Pro makamera zvakanyanya.
Zvinosuruvarisa, zvimwe zvekukanganisa kwe Hardware hazvina kugadziriswa. Iyo 108-megapixel sensor ine yakamanikana kwazvo yakatarisa ndege uye zvinoreva kuti mapikicha ako anogona kunge asiri ekutarisisa. Mhedzisiro yezvidzidzo mune dzepedyo-kumusoro zvinowanzo svibisa futi.
Iyo 13-megapixel Ultra-yakafara kamera haina kuenderana neiyo huru sensor maererano neruzivo kana kupinza. Nekudaro, sekureba sekunge usiri pixel peeping, iwe unowana anotaridzika anotaridzika mafoto mune akawanda mamiriro. Iyo yepedyo-kune-yakasikwa kara kugadziridza kweiyo yakafara-kona kamera yakasiya ini ndakashamiswa uye iyo skewing mhedzisiro haisi kuoneka pamakona eiyo furemu.
Iyo 5-megapixel macro kamera yakanaka kana ichienzaniswa nemacro kamera zviyero. Inoshanda mushe masikati machena uye unogona kuwana kutaridzika padyo-kumusoro nyore. Nekudaro, ini ndakasarudza kutora iwo iwo mufananidzo ndichishandisa iyo 108MP modhi uye kurima iyo kuti uwane mhedzisiro iri nani. Mifananidzo yemifananidzo yemifananidzo ine yakanakisa nyaya yekuparadzanisa yezvinhu zvakajairika nevanhu.
Vhidhiyo yemhando yakanaka paMi ​​10T Pro. Iwe unogona kurekodha kusvika kumavhidhiyo e8K mune hunhu hwakanaka. Nekudaro, ini ndakawana mashandiro nenzira zvirinani mu4K uye 1080p. Iwo mavhidhiyo anotaridzika padhuze neakasikwa aine akapingudzwa mavara uye akanaka kudzikamiswa. Pane nyaya dzine chekuita nekuvhima dzimwe nguva asi ini handina kusangana nenyaya hombe neizvozvo. Iniwo ndaifarira manejimendi ekuratidzira uku ndichipfura zvidzidzo zvine emit dzakasiyana mwenje.
Iyo 20-megapixel kamera yakafanana zvakaenzana uye ndakafadzwa nemabatiro ainoita matoni eruvara. Iwo matoni eganda anga achiri akatsvuka kupfuura zvandaida asi kune vanhu vazhinji, selfies ichave yakanyanya kukwana neiyi foni.
Iyo Mi 10T Pro inoshandisa bhatiri re5000mAh kuti izvichengete iri vapenyu uye sezvingatarisirwa, foni inopa yakasarudzika hupenyu hwebhatiri. Ini ndinoisa iyo Mi 10T Pro kuburikidza neangu enguva dzose mashandiro ebasa, kusanganisira anowanzoita mafoni, misangano yevhidhiyo, zvemagariro media kubhurawuza, kutarisa YouTube mavhidhiyo nguva nenguva, uye kutora zvigadzirwa zvigadzirwa. Iyo Mi 10T yakagara zuva rese uye ndokuzozviita kunotevera masikati. Ini ndakasiya foni mu144Hz yekuvandudza mwero modhi nguva dzose uye ndakachengeta iyo auto-kupenya yakavhurwa. Kana iwe uine hanya nehupenyu hwakanaka hwebhatiri pane iyo yekutanga foni, iyo Mi 10T Pro yakanaka kunhonga.
Xiaomi yakavandudza iyo wired kuchaja system. Iine nyowani-yakapatsanurwa-yekuchaja system iripo, iyo Mi 10T Pro inobhadharisa isingasviki awa nechaja yakapihwa. Sezvo Xiaomi asina kunditumirajaja, ini ndaishandisa iyo 27W inokurumidza charger kubva kuPoco X2 uye yakazadza bhatiri mune angori pasi pe1.5 maawa. Zvinosuruvarisa, Xiaomi akakwenenzvera iyo inokurumidza isina waya kuchaja pafoni dzeT. Muchokwadi, hapana cheji isina waya zvachose paMi ​​10T Pro.
Xiaomi Mi 10T Pro: Unofanira kuitenga here?
Mushure mekupedza padhuze nemavhiki maviri neMi 10T Pro, ndasvika pamhedziso iyi - iyo Mi 10T Pro haisi mutsivi weMi 10 5G. Xiaomi inogona kuiunza seyakadzokororwa modhi asi musimboti, ingori yakadiridzwa-pasi vhezheni yeMi 10 5G inotengesa nemitengo yakaderera. Iyo inorasikirwa neakajeka AMOLED kuratidza inofarira iyo 144Hz LCD, inorasikirwa imwe kamera, uye inorasikirwa neasina waya kuchaja. Iyo Mi 10 5G ichiri iyo chaiyo mureza kubva kuXiaomi muIndia uye chiitiko chinonakidza pane zvese.
Izvi zvinoreva here kuti Mi 10T Pro haina kunaka? Kana iwe wapfuura kuburikidza neongororo yangu, ini ndanyora zvinhu zvakawanda kwazvo izvo Mi 10T Pro inoita chaizvo. Iyo ine imwe yeakanakisa maLCD anoratidza pane smartphone ine buttery-inotsvedza 144Hz yekuvandudza mwero. Iyo kamera yekugadzirisa iri pamusoro peiyo Mi 10 setup kana zvasvika kune mufananidzo post-kugadzirisa. Runhare runogara nyore zuva rese kunyangwe kune vakapindwa muropa nefoni seni. Iyo MIUI 12 interface inogadzira zingy mushandisi ruzivo. Uye mukomana zvinoita sezvakanaka! Iyo chaiyo yeziso candy, kunyanya iyo girazi kumashure. Iyo Mi 10T Pro inounza yakakodzera mureza ruzivo, kunyangwe ingori notch pazasi peMi 10 5G.
PaRs 39,999, iyo Mi 10T Pro inosvika padyo neOnePlus 8T uye kusvika parizvino, ini ndakawana mafoni ese ari maviri akaenzana anokwanisa. Vamwe vangasarudza nzira yeOnePlus kune yekutanga smartphone, kureva kuti rakapusa software ruzivo nekumhanyisa-kutsanya kuchaja, nepo vamwe vangangoda izvo zvinopihwa naXiaomi. Ingori nyaya yekuti unoona uchifarira chiitiko chipi. Ini pachangu ndinoda iyo Mi 10T Pro yehupenyu hwayo hukuru hwebhatiri uye anoshamisa makamera. Kana iwe uchida kuchengetedza mamwe madhora, iyo yakajairika Mi 10T ine 64-megapixel main kamera iri kunyange iri nani chibvumirano.
Xiaomi Mi 10T Pro ongororo: Simply inotyisa!
Xiaomi Mi 10T Pro Ongororo